मुद्रा बनाउन कसरी Snapchat संग आजकल? - मेरो मुद्रा बनाउने ब्लग
जुन 11, 2018 जुलाई 23, 2018 व्यवस्थापक0टिप्पणीहरू Snapchat पैसा बनाउन, भुक्तानी प्रोमो, prodcuts बेच्न, Snapchat, सामाजिक Snapchat
यो कारोबार र युवा बीच एक मनपर्ने छ. तथापि, Snapchat साँच्चै के र तपाईं यस संग पैसा गर्नेछ? हामी तपाईं को लागि यस को लागि खोज थिए!
Snapchat भिडियो पठाउन सकिएन जहाँ आफ्नो मोबाइल मा एक कार्यक्रम छ, सन्देश र फोटो. सबै मनपर्ने WhatsApp यसलाई तुलना. तर, त्यहाँ तुलना कार्यक्रम संग एक ठूलो फरक छ: पठाइएका छन् कि सन्देशहरू, को त-called'snaps ', सेकेन्ड को एक जोडी पछि अचानक हराउनु.
कार्यक्रम लगभग द्वारा उपयोग गरिएको छ 180 लाख मान्छे दैनिक र जवान व्यक्तिहरूसँग विशेष लोकप्रिय छ. कार्यक्रम निःशुल्क छ र एउटा खाता स्थापित गर्नुभएको जब तपाईं सुरु हुनेछ. घटनाको खाता प्रयोग गर्नका लागि तयार छ, यसलाई आफ्नो पहिलो तस्वीर साथीहरू समावेश गर्न केही कार्यहरू लिन्छ.
त्यसपछि वास्तविक काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं सबै भन्दा राम्रो साझेदारी सुरु हुन सक्छ, सबैभन्दा humorous'snaps’ सँगै आफ्नो चुनिएको साथीहरूसँग. तपाईं एक तस्वीर वा तस्वीर सिर्जना गर्न र फिल्टर समावेश बटन को प्रेस को एक जोडी संग. Snapchat अद्वितीय फिल्टर को विशाल विकल्प को एक परिणाम रूपमा अत्यन्तै लोकप्रिय छ. जान आफ्नो तस्वीर वा चलचित्र is'ready निम्न ', सेकेन्ड को राशि ठाँउ (बीच 1-10 मिनेट ). पछिल्लो, तपाईं प्रेस .
स्वाभाविक पनि सबैलाई हेर्न र तपाईं आफ्नो Pals तिनीहरूलाई साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्ने तस्वीर हो. यी सबै तस्वीर को लागि समय को राशि चयन गर्न सम्भव पनि छ. additional'snaps संग गौरव’ यी चित्रहरू लागि आफ्नो साथीहरू को म्याद रहन छ 24 घण्टा.
Snapchat संग नगद कमाउन
सबैलाई सामाजिक वेबसाइट संग नगद कमाउन गर्ने युवा पुरुष र महिला को Tales थाह. इन्स्टाग्राम यो एक शानदार उदाहरणका छ. तथापि, केवल इन्स्टाग्राम साइकलबिना लागि शानदार छ. उत्कृष्ट नगद पनि Snapchat संग उत्पादन हुन सक्छ. हामी यसलाई केही गर्न सम्भव छ कसरी वर्णन (थप ) पैसा.
यो वास्तवमा मात्र Snapchat को सहायता संग एक अपेक्षाकृत सरल तरिका मा पैसा कमाउन सरल तरिका छ. यो प्रक्रिया मार्फत एउटा फरक व्यापार बाट उत्पादनहरु बजार. को मजाक तपाईं सूची आफैलाई आवश्यक छैन भन्ने छ र तपाईं पैकेज गर्न र जहाज आदेश आवश्यक. अवधारणा छ कि एक विशेष जडान मार्फत, तपाईं वस्तुमा कुनै संकेत. प्रश्न मा व्यापार (जसमा वस्तु उपलब्ध छ ) त्यसपछि एक संभावित खरीद भएको छ कि बुझ्नुहुन्छ . तपाईं यस को लागि एक पुर्नभुगतान प्राप्त.
तपाईंले यी तरिकामा पुर्नभुगतान प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ: एक बिक्री देखा परेको छ रूपमा, देखि एक क्लिक सिर्जना गरिएको थियो, वा एउटा प्रस्ताव पेश भएको थियो रूपमा.
संबद्ध विज्ञापन सुरु गर्न एउटा संबद्ध सिस्टम प्रयोग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. नेदरल्यान्ड त्यहाँ प्रसिद्ध संबद्ध कार्यक्रम को दायरा छन्, उदाहरणका Daisycon वा Zanox लागि. यी सञ्जालहरू अभियान को एक विशाल चयन प्रदान, जसको लागि तपाईं बजार सामान भर्ना र त्यसपछि सक्छ. सबै आय ती संबद्ध कार्यक्रम गरेर प्राप्त छन् र पछि तपाईं भुक्तान गर्दै.
तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि धेरै समस्या बिना एक सानो अतिरिक्त नगद बनाउन सक्छ.
एक प्रिमियम खाता आवश्यक
यसरी सबैको लागि उपयुक्त छैन र हामी पनि सुरु गर्नु अघि तपाईंले यो राम्ररी विचार सुझाव गर्न चाहनुहुन्छ.
Snapchat प्रिमियम खाता सुरु गर्न मौका प्रदान गर्दछ. यी रिपोर्टहरू अन्य प्रयोगकर्ताहरू सुरक्षित छन्. यी उच्च प्रोफाइल खाताहरू एक पिक छ संभावना छ, तर तपाईंले तिनीहरूलाई ढाक्न भयो.
धारणा सरल छ:'सेक्स बेच्छ'. एक प्रिमियम खाता प्रयोगकर्ताको रूपमा यो खाता को माध्यम द्वारा आफ्नो अनुयायीहरूलाई साथ सँगै तस्बिरहरू तातो साझेदारी गर्न सम्भव छ. यी तस्वीर बस भुक्तानी पछि प्रदर्शित छन्.
एक उच्च खाता एक मालिक आफ्नो अनुयायीहरूलाई पछि क्षतिपूर्ति गरेका निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसबाहेक प्रति तस्बिर वा तस्बिरहरू संग्रह. भुक्तानी छन् जो शुल्क, सबै मालिक जो प्रिमियम station.Everything राम्रो र सुखद देखिन्छ व्यक्ति भ्रमण र तपाईंले यसलाई संग सभ्य पैसा बनाउन सक्षम, तर यसको बारेमा राम्ररी विचार.
फेसबुक र इन्स्टाग्राम उद्यमीहरू संग उल्लेखनीय लोकप्रिय छन्. को स्टेशन व्यापारिक वा समाधान को बिक्री गर्न पूर्ण आफूलाई दिन. स्पष्ट, Snapchat पनि व्यापार रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, तपाईंको व्यापार Snapchat को लक्ष्य सेट मेल खाने विशेष यदि.
समयमा तपाईं दैनिक व्यक्तिहरूको हजारौं को असंख्य दसौं पुग्न सक्षम छन् र पूर्ण मुक्त Snapchat. यसलाई फलस्वरूप एक उद्यमी वा एक अतिरिक्त आय रूपमा लागि एक उत्कृष्ट सुधार हुन सक्छ.
Snapchat एकदम बिट एक फोल्डर वा ब्यानर को माध्यम द्वारा आफ्नो व्यापारिक बजार प्रयास भन्दा बढी निजी.
व्यक्तिहरूको ठूलो सम्झौता यो स्टेशन मार्फत आफ्नो सेवा वा उत्पादन गर्ने बजार पहिले नै छन्, आफ्नो साइट वा webshop लागि एउटा सन्दर्भ निर्माण.
उदाहरणका बाटो द्वारा, हामी यो मध्यम लुगा वा आभूषण बिक्रीको लागि शानदार छ कि कल्पना गर्न सक्छ, उदाहरण को रुपमा. यो पनि एक दृढ लागि आफ्नो Snapchat योजना अन्य कारोबार सहयोग गर्न सिद्ध तरिका हुनेछ. संक्षिप्तमा: संभावनाहरु अनन्त छन्.
धेरै अन्य सामाजिक सञ्जाल जस्तै, को narrative छ: अधिक अनुयायीहरूलाई, अधिक आकर्षक तपाईं कारोबार हुनुहुन्छ. कारोबार तपाईंको रुचिको केही उत्पादनहरु उद्धार गर्न आफ्नो खाता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
तर, यो एक निगम आफ्नो ढोका दस्तक हुनेछ स्पष्ट छैन. एक उत्साही Snapchatters लागि आरक्षित छ. अक्सर यसको लागि तपाईं आउँदै केही व्यवसाय गर्न तल आउँछ, सम्भाव्य सहयोग को लागि.
प्रदायकहरूको एक प्रस्ताव समावेश र पनि Snapchatter रूपमा जान सक्षम छन्, कि हैन. यो ठूलो महसुस गर्न भन्दा आफ्नो अनुयायीहरूलाई dissuade छ. यदि क्लिक छ, त्यसपछि तपाईं आफ्नो स्टेशन मार्फत भुक्तानी पदोन्नति सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
सबैभन्दा Snapchatters यसलाई बाहिर पैसा बनाउन चाहिने बिना स्टेशन सुरु. को नहर को वृद्धि हदसम्म प्राकृतिक र धेरै काम बिना छ.
तपाईं बस Snapchat सुरु, तपाईंको नगद लागि, तर तपाईं केहि प्राप्त गर्न पर्याप्त अनुयायीहरूलाई छैन, त्यसपछि हामी तपाईं को लागि केही रणनीति भयो.
Snapchat थप अनुयायीहरूलाई? हाम्रो सुझाव
Snapchat थप अनुयायीहरूलाई प्राप्त केवल गरेको छैन. यो धैर्य र समय चाहिन्छ. यी सुझावहरू आफ्नो बाटो मा तपाईं मदत गर्न सक्छ:
आकर्षक तस्बिरहरू प्रदान;
विशेष समयमा लेख, त्यसैले आफ्नो अनुयायीहरूलाई तपाईं प्रत्येक समय फर्कन कि;
आफ्नो लेख संरक्षण तपाईं अन्य सामाजिक सञ्जाल स्टेशन मार्फत यसलाई वितरण गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ तपाईंले पक्कै Snapchat संग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ;
तपाईं hashtags अन्य सामाजिक वेबसाइट मार्फत फैलाउन जानकारी समर्थन गर्न निश्चित हुनुहोस्. उदाहरण को बाटो द्वारा, विशिष्ट कारोबार गरेर खास सामग्री याद गर्न सकिएन #slimmetip;
मुनि ई-मेलहरू तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम सेट, तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नै व्यापार कार्ड राख्नु, साइटहरु मुनि तिनीहरूलाई ठाँउ;
the'snap नक्शा 'मा आफ्नो व्यापार सम्मिलित, जो तपाईं देखिने बनाउँछ;
एक असाधारण र विशिष्ट घर डिजाइन उत्पादन, तपाईं एक snapchatter रूपमा अद्वितीय र पहिचान बनाउन.
तपाईं को लागि राम्रो काम गर्छ के हेर्न र सुरु.
Snapchat छैन यो पैसा कमाउन आउँदा तपाईं सुरुमा विचार हुन सक्छ मध्यम छ. माथिको उल्लेख ब्लग तपाईं प्रेरित गरेको हुन सक्छ र विश्वास गर्न कारण. त्यहाँ संभावना को एक नम्बर हो. तिनीहरूले प्रमुख तपाईं मनमा यो पायो गर्नुभएको मा मामला को restof आफूलाई अलग छ, तपाईं Snapchat मा एक शानदार रहन बनाउन सक्छ. तडक संग आज सुरु! PAYPAL MONEYNOSURVEY!
← Bitcoin कसरी काम गर्दछ?
टिभी संसारमा पैसा कमाउने तरिका →
प्रतिलिपि अधिकार © 2019 मेरो मुद्रा बनाउने ब्लग. सबै अधिकार सुरक्षित.